Maraoka: Tranonkala Sy Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2017 10:09 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Português, Italiano, عربي, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español, English
(Marihina fa tamin'ny 17 Jona 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Raha te hiresaka momba ny sehatry ny aterineto Maraokana aho, dia tsy ho rentsika mihitsy ny faran'izany. Fantatrareo ny fahalianako amin'ny fifantohana amin'ny kaopy feno tapany. Afa-po tamin'ny fehintsoratra iray aho tamin'ity indray mitoraka ity :
Nandritra ny ora maro, niezaka niditra tamin'ny tranonkalan'ny gazety Al Massa aho. Ilay gazety izay heverina ho malaza indrindra hatramin'izay ao Maraoka. Tsy tafiditra mihitsy anefa aho. Toy ny eo am-panamboarana hatrany ny tranonkala. Azonay ekena ny zava-misy amin'ny tranonkalan'ny gazety hafa izay manana mpanao gazety tsy mamaky izany akory noho ny faharatsiany sy ny tsy fahafahana miditra aminy fa tsy azo ekena ho an'ny gazety manana fifamoivoizana sy fidiram-bola lehibe indrindra ny manana tranonkala ahitana olana ara-teknika matetika. Amin'ny farany, manambara ny gazety fa nihoatra ny salanisa tsara indrindra teo aloha ny isan'ny olona izay nitsidika ny tranonkalany ! Mazava ho azy raha nahatratra ny salanisa tsara indrindra ny isan'ny mpitsidika satria tsy maintsy manavao ny pejiny in-100 ny mpamaky mba ahafahany mamaky ny antsasaky ny lahatsoratra.